Indlela ekhethwe kahle wokunakekela izinwele kungaba abanike akhanye futhi impilo. Ngaphezu kwalokho, zisiza ukuba sibhekane nezinkinga ezifana dandruff, ekhanda ezomile kanye imikhawulo okuhlukene. abakhiqizi owaziwa anikele ezihlukahlukene amashampu esiyingqayizivele, buso kanye balms, okuyinto zenzelwe ukubuyisela futhi uqinisa isakhiwo ngisho izinwele ezilimele kakhulu. Kulesi sihloko uzofunda mayelana ochungechungeni "Els Fibrologiya", ukubuyekezwa zazo ukufakazela ekulenzeni libe namandla.
izinwele uchungechunge "Els Fibrologiya" - imali ekhungathekisayo
abanakekeli okusha kusuka nomkhiqizi elinedumela elihle izinwele "Loreal" "Els Fibrologiya" uye abe intandokazi abesifazane emhlabeni wonke. Ifomula esiyingqayizivele ikuvumela ukuba alulame izinwele abalimala ngokushesha ngangokunokwenzeka, ebanikeza eliphakeme nakakhulu futhi amandla. Lokhu kusebenzisa indlela ephelele, anabamemezeli izindlela ezilandelayo:
Shampoo "Els Fibrologiya" kabani Ukwakheka ivumela ukwandisa kwabantu of izinwele. Ngemuva kwesicelo ungqimba zokuzivikela ngalinye wadala, okuvumela ukuba silondoloze umphumela etholwe.
Amafutha "Els Fibrologiya" okuyinto libuyekeza ukufakazela umphumela wawo Lentulo isakhiwo izinwele. With ukusetshenziswa njalo kuyinto asebenzayo lipid ukugcwaliswa.
Serum Double "Els Fibrologiya", eklanyelwe ukulolonga izinwele kusukela empandeni kuya enika. It kubanika kukhanye silky futhi yemvelo.
Ukuzifihla "Els Fibrologiya", ukubuyekezwa okhombisa kwayo phakathi kwabesifazane. Leli thuluzi esiyingqayizivele namuhla sizobe ukukhuluma okwengeziwe.
Izici buso "Els Fibrologiya"
Kungani imaski ochungechungeni ekunciphiseni ejenti ukuze izinwele kudingeka siyinake ngokukhethekile? Zonke sibonga ngezithako zawo ocebile, okuhlanganisa imfuyo filoksan. Le ngxenye avame ukunqwabelana ezinweleni, ukudala eliphakeme nakakhulu. Lapho umphumela le sicelo uyakwazi ukubamba izinsuku ezingu-7.
ukusetshenziswa njalo buso anganikeza ecwaninga lula ngisho izinwele engalawuleki kakhulu. Kulesi izinwele akuyona libe nzima ngokwengeziwe, kodwa kunalokho, bheka enempilo futhi shiny. Ngokucophelela ukuthungwa imaski yenza kube lula ukusabalalisa konke phezu kwekhanda, okwenza le nqubo izinwele ukunakekelwa emnandi.
Imiphumela engapheli nokusetshenziswa kwezimali kungabonwa lingakapheli isonto ukusetshenziswa njalo. Ngaphezu kwalokho, umphumela wokuphindelela okuyinto kwakha buso, ngakho iyakwazi ukugcina unaphakade ukuminyana futhi ivolumu, kancane kancane ukuqina isakhiwo izinwele.
Ukuze ukulingana imaskhi "Els Fibrologiya"?
Umthengi Izibuyekezo sikhungo kuphela ukufakazela ekulenzeni libe namandla. Njengoba lona wesifazane, imaskhi uphelele abanikazi imicu mncane futhi ezingaphili. Lokhu sikhula nje ngokwakheka izinwele, kodwa futhi ukuze uqinise ama layo futhi iyinika ibhalansi amanzi-lipid.
Yingakho imaskhi kusuka "Loreal" "Els Fibrologiya", ukubuyekezwa zazo akhayo kakhulu, iyithuluzi elihle lokuthola futhi esiwuhogelayo amandla silken izinwele. Kulokhu, akunandaba yini esimweni ababekuso ngo ngaphambi kokuqala inqubo yokutakula.
Abesifazane owangena ubunjalo izinwele aminyene futhi obukhulu Ungaphinda usebenzise buso "U-Elsa". Phela, kuyokusiza alondoloze bemvelo ukunikeza umsoco awudingayo ukuthi kubalulekile enkathini beriberi kanye lokushisa izinguquko. Futhi ngokuhlanganyela lonke eningi imali unekhono ukunikeza cishe izinwele ukunakekelwa salon ekhaya.
Njengoba kushiwo ngaphambili, isithako esebenzayo eyinhloko esikhathazeka ngayo imaskhi filoksan okuyinto lwezimpawu futhi sikhula isakhiwo izinwele. Ngaphezu le nto eyivela kancane kuleli mkhiqizo ubandakanya eziningi nezakhi ezidliwa benza izenzo ezibonisa moisturize sezinwele. Ngaphezu kwalokho, izinto elisizayo, ezifana abicah, akha ifilimu on izinwele, esivikela kuzo emiphumeleni yelanga nokushisa ka. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi uma ngokuvamile owesifazane uhlala elangeni noma ujabulele ezishisayo isitayela amathuluzi.
Nokho, abathengi abaningi wesaba esiningi sulfate nezinye izakhi zamakhemikhali lichaza ekwakheni imaskhi "Els Fibrologiya". Izibuyekezo abonisa ukuthi ithuluzi akakwazi ngokuthi organic futhi kufanele kusetshenziswe ngokuqapha kubantu abanemizimba komzimba.
Kuphela elandelayo kahle imiyalelo yonke ongayifinyelela imiphumela esiphezulu kusukela ukusetshenziswa noma yimuphi umkhiqizo yezimonyo. Ngokusho umenzi, isicelo imaskhi ukuba ngokuhlanganyela lonke eningi imali, "Els Fibrologiya". Nokho, ku-, ibonisa ukuthi lesi evamile amacebo okuthengisa ongawacabanga. Ngakho-ke, imaskhi kungenzeka ingasetshenziswa ngokuhlanganyela amashampu futhi balms kwezinye izinkampani.
Ngaphambi isicelo, ugeze izinwele zakho. Uma wayefisa, ungakwazi ukusebenzisa namafutha, okuyinto kubalulekile ugeze off. izinwele Wet lidinga ezomile kancane ithawula futhi zisebenza esincane imaskhi "Els Fibrologiya", ngokulinganayo wokuyidlulisela kusukela ezimpandeni kuya amathiphu.
Ukuze umphumela esiphezulu, kudingeka sigcine ithuluzi on izinwele imizuzu okungenani engu-15. Lokhu kulandelwa ugeze off the imaskhi ngamanzi afudumele ngaphandle imoto. Ukuze uphawule Imiphumela ehlala njalo, ukuze afeze izinqubo ngokwanele izikhathi 2-3 ngesonto.
ukuthini izinwele imaski kangakanani?
Naphezu ifomula eliyingqayizivele futhi umphumela amangalelwe imaskhi, ukubaluleka kwalo iyatholakala kuzo zonke amabhajethi. Ngokwesibonelo, nophiso 300 ml izobiza ruble 200-250. Kulokhu, ivolumu izimali ngokwanele ukuba isikhathi inkambo 1 inyanga ukusetshenziswa.
Kufanele kuqashelwe ukuthi uchungechunge yonke imikhiqizo izinwele ukunakekelwa kusukela "Loreal" libhekisela isigaba isabelomali. Ngokwesibonelo, imoto angathengwa ruble 150, kanye serum izobiza ruble 300. Futhi uma ukuthenga nje lonke uchungechunge esitolo, ungathola isaphulelo omuhle. izindlela ezifanayo abakhiqizi angaphandle elite abiza amakhasimende kuyabiza kakhulu.
Lapho ukuthenga izinwele imaski "Els Fibrologiya"?
Inzuzo enkulu yochungechunge kuyinto lungeneke yayo. Thenga noma yiziphi izindlela "Els Fibrologiya" can ezinkulu ezinkulu noma ezitolo amakhemikhali zasendlini kanye izimonyo. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi oda futhi ngokushesha ukuhlola uchungechunge yonke kwi website esemthethweni ye umenzi, elibamba ukukhushulwa njalo nemincintiswano phakathi amakhasimende abo. Ngokwesibonelo, inkampani labetibambile umdwebo phezu Ukubuyekeza engcono yochungechunge "Fibrologiya" ekuqaleni kuka-2015. Abawinile Uthole isipho imikhiqizo izinwele ukunakekelwa kanye nezinye imiklomelo eziwusizo.
Ukuzifihla "Els Fibrologiya": abathengi yangempela Izibuyekezo
Kunzima ukuba wahlulele izinga imikhiqizo yezimonyo kuphela ulwazi oluphrintwe iphakethe. Ngakho-ke, ukuba sesimweni esingcono ukhulume ukusebenza yochungechunge "Els Fibrologiya" ukubuyekezwa.
serum Double, imoto, conditioner futhi imaski - zonke lezi zimali babé izintandokazi ezinkulungwane zabesifazane emhlabeni. imibono eziningi abathengi abonisa ukuthi uchungechunge "Els Fibrologiya" kwandisa ngempela kwabantu izinwele ukuthi iba olubonakalayo izicelo ezimbalwa. Ngesikhathi esifanayo ngenkuthalo aqede izinkinga ezifana kome ekhanda kanye imikhawulo okuhlukene.
Ngokusho abasebenzisi bayo, ezinkulu inzuzo chungechunge wukuthi yonke imikhiqizo ingasetshenziswa hhayi kuphela eziyinkimbinkimbi, kodwa futhi ngamunye kubo ngokwehlukile. Kulokhu, umphumela kuyoba nje njengoba omuhle. Ikakhulukazi abesifazane baphathwa Imiphumela nehlala njalo ngemva kokuya endlini buso, "Els Fibrologiya".
Serum izimpendulo zazo futhi omuhle, ubhekana ukuvuselelwa kanye nokudla. Ngokusho abathengi, ngemva nezinwele silky futhi eside ukugcina nokupakisha. Lo mkhiqizo iyisibusiso abanikazi mihlobiso futhi curls abangalawuleki.